नेपालमा फुटबलको प्रारम्भ भारत सम्बन्धबाट सम्भव ! - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
नेपालमा फुटबलको प्रारम्भ भारत सम्बन्धबाट सम्भव !
Posted by Pariwartan Devkota | ३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १६:३८ |
३१ जेष्ठ, काठमाण्डौं । ​नेपाल र भारतबीच अरुजस्तै खेलमा पनि राम्रो सम्बन्ध रहेको छ । अफ विशेषगरी फुटबल र क्रिकेटमा दुई मुलुकबीच प्रगाढ सम्बन्ध रहेको विगतका इतिहासले पुष्टि गरेको छ । साफदेखि विभिन्न संस्करणका खेलमा नेपाल भारत आमुने–सामुने भएका छन् । जसले दुई देशीय सम्बन्ध नवीकरणसँगै अझै कसिलो हुँदै गएका छन् ।
भारतमा भएका कयौं अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली भारत गएका छन् । त्यस्तै काठमाण्डौमा सम्पन्न भएका कयौं फुटबल खेलमा भारतले सहभागी जनाएको छ ।
नेपालले भर्खरै पनि यही जेठ २३ गते भारतको राष्ट्रिय फुटबल टोलीसँग मुम्बइको अँधेरी स्पोर्टस कम्प्लेक्समा अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल सम्पन्न भएको थियो । एएफसी एसियन कप फुटबल छनोटअन्तर्गत यही जेठ ३० गते काठमाडौँमा हुने यमनविरुद्व खेलको तयारीका लागि नेपालले भारतसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको एन्फाले जनाएको थियो ।​
त्यसैगरी नेपालले चौध वर्षमुनि महिला खेलाडी सम्मिलित एएफसी यु–१४ गल्र्स रिजनल च्याम्पियनसिपमा भारतसँग खेलेको थियो । दशरथ रङ्गशालामा सेमिफाइनल खेलमा नेपाली महिला टोलीले भारतसँग खेल खेलेको थियो । जसमा भारतलाई नेपालले १–० गोलले पराजीत गरेको थियो ।
नेपालको फुटबल इतिहास भारतको योगदान
नेपालमा फुटबलको इतिहासलाई खोतल्ने हो भने, यसको योगदान भारतलाई जान्छ । विश्वमा अङ्ग्रेजी साम्राज्यको विस्तारसँगै फुटबल विश्वभर फैलने क्रममा एसिया र अन्ततः दक्षिण एसियामा आएको देखिन्छ । भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले राज्य गरेपछि नेपालमा पनि त्यसकै प्रभावले फुटबल भित्रिएको छ । तिहारताका फालिने भोगटेलाई युवाहरू गुडाउने अथावा हिर्काउने परम्परा अन्ततः नेपाली फुटबलको इतिहास बन्न पुगेको छ । यद्यपि भकुन्डोलाई हिर्काउने खेल नै फुटबल हो भनेर कसैलाई थाहा थिएन ।
नेपालमा राणाकालीन समयमा राणा परिवारबाहेक सर्वसाधारण जनताका लागि पढ्ने लेख्ने छुट थिएन । भारत गएर उच्च शिक्षा हासिल गरेर नेपाल छिरेकाहरू सीमित थिए । त्यसैबेला केही जङ्ग थापा र नरसिंह राणाहरू पनि पढ्न भारत गएका थिए । त्यो समय भारतमा अङ्ग्रेजी शासन हँदा, स्कूल र कजेजमा अङ्ग्रेजले आफूसँगै ल्याएका खेलहरू पनि खेलिन्थे । त्यही समय भारतमा पढेकाले नै पहिलोपल्ट फुटबल खेलेको र नेपाल छिराएको मानिदैँ आएको छ ।
खेलको सम्बन्धः भारतका राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान नै नेपालीमूलका
नेपाली मुलका सुनील क्षेत्री नै भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान हुन् । उनी नेपालीभाषी हुन् । उनको झुकाव नेपालतिर छ खेल भारतबाट खेल्छन् । यसरी उनले पनि खेलमार्फत नेपाल र भारतलाई जाड्दै आएका छन् ।
भर्खरै बैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका भारतीय फुटबलका कप्तान तथा स्ट्राइकर सुनील क्षेत्रीले आफ्नो वैवाहिक बन्धन हिन्दु परम्पराअनुसार भएको छ ।
उनले आफ्नो बैवाहिक सम्बन्धका दिन कप्तान क्षेत्रीले ढाका टोपीमा सजिएर घोडामा चढि दुलही लिन गएका थिए । क्षेत्रीको विवाह कोलकतास्थित गुडगाउँको एउटा होटलमा भएको थियो ।
लामो समयदेखि सोनम भट्टाचार्यसँग प्रेममा रहेका क्षेत्रीले विवाह दिनसमेत नेपाली बोलेका थिए । उनले विवाह गरेकी सोनम भट्टाचार्य मोहन बगानका पूर्वउत्कृष्ट खेलाडी सुब्रत भट्टाचार्यकी छोरी हुन् ।
३३ वर्षीय नेपालीभाषी सुनील क्षेत्रीको मामाघर नेपालको झापा हो ।
खेलले सम्बन्ध जोड्छ
खेल र लेख दुबैमा भारतीय र नेपाली भन्ने जात गौण हुन्छ । किनकि खेलमा एक पक्षले तित्छ भने अर्कोले हार्छ । दुबैले तित्न असम्भव छ । जसमा आफू पनि पर्ने सम्भावना रहँदारहँदै पनि दुबैपक्ष यो कुरा जान्दाजान्दा पनि खेल खेल्न तल्लिन हुन्छन् । किनकि यसले दुईपक्षबीचको भाइचाराको सम्बन्धलाई कसिलो बनाउने गर्दछ ।
Previousप्रधानमन्त्री ओली तिब्बत सम्म पुग्ने , कनेक्टिभिटी सगँ सम्बन्धित एक दर्जन सम्झौताको अपेक्षा
Nextट्रम्प-किमको भेटघाटमा पुरै खर्च व्यहोरोर सिंगापुरले के–के पायो ?
लस एन्जलस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिमान र ट्रक ठोक्कियो : पाँचजना घाइते
७ जेष्ठ २०७४, आईतवार १५:५०
ठूला दरका भारतीय नोट सटही नहुने संकेत !
१८ असार २०७५, सोमबार ०७:०४
१ कार्तिक २०७४, बुधबार १३:४९
५ माघ २०७३, बुधबार १२:३२